रूसी क्रान्ति पुस्तकहरू
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 1
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 2
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 3
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 4
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 5
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 6
रसियन क्रान्ति क्रसशब्द # 7
रूसी क्रान्ति क्रसवर्डहरू
रूसी क्रान्ति कागजातहरू
रसियन क्रान्ति निबन्ध प्रश्नहरू
रूसी क्रान्ति ग्राफिक्स
रूसी क्रान्ति इतिहासकारहरू
रसियन क्रान्ति मानचित्र
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - घटनाहरू 1907-1916
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1917
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - घटनाहरू 1918-1924
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - क्रान्तिकारीहरू
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - tsarists
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी: अवधारणा (I)
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी: अवधारणा (दोस्रो)
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज: घटनाहरू 1906 बाट 1913
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज: घटनाहरू 1914 बाट 1916
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज: 1905 मा घटनाहरू
रूसी क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी: विचारहरू
रूसी क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #1
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #2
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #3
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #4
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #5
रूसी क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न #6
रूसी क्रान्तिले क्विज गर्छ
रसियन क्रान्ति कोटेशन
रूसी क्रान्ति विषयहरू
रूसी क्रान्ति क्रिसमस
रुसी क्रान्ति जसले को हो
रूसी क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - अवधारणाहरु
रूसी क्रान्ति क्रान्ति शब्द - मानिस
रूसी क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - स्थानहरू
रूसी क्रान्ति क्रान्ति wordsearches
रसियन क्रान्ति एक ग्राउन्डब्रेकिंग घटना हो जसले रूसको मार्ग परिवर्तन मात्र गर्‍यो, यसले विश्वभर 20th शताब्दीलाई पनि आकार दियो।
20th शताब्दीको पालोमा, रूस विश्वको सब भन्दा ठूलो र सब भन्दा शक्तिशाली साम्राज्य मध्ये एक थियो। यसको ल्याण्डमास यूरोपदेखि एशियामा फैलियो र विश्वको छैटौं भाग फैल्यो। रसियाको जनसंख्या 100 मिलियन भन्दा बढी भयो, दर्जनौं जातीय र भाषिक समूहहरू फैलाए। यसको शान्तिको समयमा रहेको सेना विश्वमै सब भन्दा ठूलो थियो।
यसको विशाल आकार र शक्तिको बावजुद, रूस आधुनिक जत्तिकै मध्यकालीन थियो। रूसी साम्राज्यमा केवल एक व्यक्तिले शासन गरेको थियो, जसार निकोलस दोस्रोजसले आफ्नो राजनैतिक अधिकार परमेश्वरबाटको वरदान हो भनेर विश्वास गर्थे। 1905 मा, जारको निरंकुश शक्ति द्वारा चुनौतीको थियो सुधारवादी र क्रान्तिकारीहरू एक आधुनिक प्रजातान्त्रिक रूस निर्माण गर्न खोज्दै। पुरानो शासन बचियो 1905 को चुनौतिहरु - तर विचार र बल यो हटाइएन।
विश्व युद्ध I रूसमा क्रान्ति को उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्‍यो। युरोपका अन्य पुरानो राजतन्त्रहरू जस्तै रसिया पनि युद्धको लागि उत्सुकतासाथ लड्यो र यसको नतिजाबारे सोचेन। एक्सएनयूएमएक्स द्वारा, युद्धले लाखौंको मृत्यु भएको थियो, रूसको अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको थियो र झार र उसको शासनको लोकप्रिय समर्थनलाई घटायो।
निकोलसलाई सत्ताबाट हटाइयो र अस्थायी सरकारले हटायो - तर यो नयाँ शासनले आफ्नै चुनौतीहरूको सामना गर्यो जस्तो कि युद्धको निरन्तर दवाव र मजदुर वर्गमा उग्र कट्टरपन्थ जस्ता चुनौतीहरू। अक्टूबर 1917 मा दोस्रो क्रान्तिले रूसलाई उनीहरूको हातमा राख्यो बोल्शेविकहरू, कट्टरपन्थी समाजवादीको नेतृत्वमा व्लादिमीर लेनिन.
लेनिन र बोल्सेभिकहरुका गुणहरु लाई गुणगान गरे मार्क्सवाद र मजदुर वर्गका लागि अझ राम्रो समाजको प्रतिज्ञा गरे। तर के ती सम्मान र यी प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? के लेनिन र उनको नयाँ शासनले मजदुरहरूको अवस्था सुधार गर्न सक्दछन्, युद्धको विध्वंशलाई पार गर्दै र रूसलाई आधुनिक विश्वमा तान्दै?
अल्फा ईतिहासको रूसी क्रान्ति क्रान्ति वेबसाइट रूसमा 1905 र 1924 बीचको घटनाहरूको अध्ययन गर्नका लागि एक व्यापक पाठ्यपुस्तक गुणस्तरको स्रोत हो। यसले विस्तृत सहित 400 बिभिन्न प्राथमिक र माध्यमिक स्रोतहरू समावेश गर्दछ शीर्षक सारांश, कागजातहरू र ग्राफिक प्रतिनिधित्व। हाम्रो वेबसाइट मा सन्दर्भ सामग्री पनि समावेश छ नक्सा र अवधारणा नक्शा, टाइमलाइनहरू, शब्दावलीहरू,a'को हो'र जानकारी इतिहास लेखन र इतिहासकारहरु। विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो ज्ञान परीक्षण गर्न सक्दछन् र सहित अनलाइन गतिविधिहरूको दायराको साथ रिकल गर्न सक्छन् quizzes, शब्दकोष र wordsearches। प्राथमिक स्रोतहरू पछाडि, अल्फा ईतिहासमा सबै सामग्री योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू, लेखकहरू र ईतिहासकारहरूद्वारा लेखिएका हुन्।
यस रूसी क्रान्ति क्रान्ति साइटले 1891 र 1927 बीचको रूसमा हुने घटनाहरूमा लेखहरू, स्रोतहरू र परिप्रेक्ष्यहरू समावेश गर्दछ। यो साइट अल्फा ईतिहास द्वारा बनाईएको र राखिएको हो। यसले 173,003 पृष्ठहरूमा 276 शब्दहरू समावेश गर्दछ र अन्तिम पटक अगस्त 3rd 2019 मा अपडेट गरिएको थियो। थप जानकारीको लागि हाम्रो FAQ पृष्ठ वा प्रयोग सर्तहरू भ्रमण गर्नुहोस्।